महिला, आफ्नो अनुहार तल पनि हेर !
गर्भावस्थाको समय स्वस्थ रहने मन्त्रहरु
Q मेरो हजुरआमा अघिल्लो हप्ता हाम्रो बाथरूममा चिप्लेर लड्नुभयो । त्यो घटनापछि उहाँलाई हिड्ने बेलामा केही समस्याको सामना गरिरहनु भएको छ । उहाँलाई सोध्दा उहाँले तिघ्रामा धेरै नै दुखिरहेको छ भनेर भन्नुभएको छ । मैले मसाज गर्ने मान्छेको व्यवस्था गर्ने प्रयास गरें तर उहाँलाई मन परेको छैन र उहाँले यसलाई निरन्तरता दिने अनुमति पनि दिनुभएको छैन । उहाँ यो कुराबाट पीडित हुनुपरेको अहिले २ हप्ता भएको छ । कृपया मलाई सकेसम्म चाँडै सहयोग गर्नुहोस् ।
यदि तपाईंले एक्स-रे गर्नुभएको छैन भने कृपया एक्स-रे सकेसम्म चाँडै गर्नुहोस् । बृद्ध उमेरमा, हल्का चोटहरुसहित हात भाँचिनु धेरै सामान्य कुरा हो । डाक्टरले एक्स-रेहरु सामान्य छन् नभन्दासम्म मालिस नगर्नुहोस् । त्यहि समयमा तपाईंले प्रभावित भागमा तपाईं उहाँलाई दुखाइको औषधि र चिसोले सेक्ने गर्न सक्नुहुन्छ ।
Q मेरो धेरै पसिना आउने हत्केला र खुट्टाहरु छन् । कृपया, मलाई यसको राम्रो उपचारको बारेमा भनिदिनुहोस्, धन्यवाद ।
हत्केला र खुट्टामा पसिना धेरै कारणहरु जस्तै आत्तिने, चिन्ता, त्रास हुने, उत्तेजना, केहि निश्चित खानाहरू कारण वा केही अन्तरनिहित रोगको नजिताको रुपमा हुन सक्छ । यसको आधारभूत कारणको पहिचान गर्ने र उपचार गर्ने सबैभन्दा उत्तम उपाय हो । उपचारको विकल्पहरुमा एन्टिपर्सपिरेन्ट, आयनोफोरेसिस, चिकित्सा र सर्जरीको प्रयोग समावेश छ । तपाईंलाई यसमा सहयोग गर्नको लागि छाला रोग विशेषज्ञ वा विशेषज्ञसँग परामर्श गर्नुहोस् । त्यसपछि तपाईं यी घरेलु उपचारहरू प्रयास गर्न सक्नुहुनेछ: तपाईंको हात पानीको समाधान ‌+ पकाउने सोडा वा पानी + कालो चिया नियमित रूपमा पसिना घटाउँदछ । आफ्नो हातहरु लुकाउन खल्तीहरूमा आफ्नो हात राख्न बन्द गर्नुहोस् । यसले तपाईंको परिस्थितिलाई झन नराम्रो बनाउँदछ । तपाईंको खुट्टा पसीनाको लागि: राम्रो ठीक हुने जुत्ताहरू लगाउनुहोस् । सम्भव भएसम्म, तपाईंको आफ्नो जूत्ताहरू हटाउनुहोस् र तपाईंका खुट्टाहरूमा हावा भर्न दिनुहोस् । घर आइपुगेपछि आफ्नो खुट्टाहरु धुनुहोस् । प्रत्येक दिन एउटै जूत्ताहरू लगाउन छाड्ने कोसिस गर्नुहोस् ताकि खुट्टाहरू सुख्खा हुन पर्याप्त समय पाउँछ ।
Q के मेरो अनिन्द्रा वा नसुत्ने बानीले टाउको दुखाइको सामना गर्न पर्छ ?
हो, अनिन्द्राले टाउको दुख्ने समस्या हुन सक्छ । माइग्रेन, ठाउँ ठाउँमा टाउको दुख्ने, तनावको टाउको दुखाई केही प्रकारका टाउको दुखाई हुन् जुन अनिन्द्राको कारणले हुन्छ ।
Q मेरो आमाको भर्खरै देब्रे काँखीमा ठूलो पिप जमेको जस्तो देखिएको छ । उहाँ आफ्नो हातमा हल्लाउन पनि सक्नुहुन्न । डाक्टरले काट्नको लागि भनेको छ तर उहाँ धेरै डराइरहनु भएको छ । म घरेलु बिधीबाट कसरी मद्दत गर्न सक्छु ।
जब पिप जम्ने हुन्छ, छिटो र पुरै अवस्थामा राहत पाउनको लागि पखाल्न सकिन्छ । घरेलु उपचारले दुखाइलाई कम गर्नेछ, तर यो घरेलु विधीले पुरा तरिकाले सुकाउन भने सकिदैँन । यसैले तपाईंको आमाले डाक्टरकु कुरा सुन्न आवश्यक छ ।